LEGO ® Marvel Super Heroes Cheats&Hack – Talooyin Cheats Android
Waxaa qoray Editor | Sebtembar 27, 2021
LEGO® Marvel™ Super Heroes: Universe in Peril waxa ku jira sheeko asal ah oo ka gudbaysa caalamka Marvel oo dhan. Xakamaynta Birta Manka, Caaro-Man, Hulk ah, Captain America, Wolverine iyo jilayaal kale oo badan oo Marvel ah markay u midoobaan inay joojiyaan Loki iyo tiro badan oo shar-wadayaal ah oo Marvel ah inay ururiyaan hub aad u sarreeya oo awood u leh inuu dunida baabi'iyo.!
• Dhamaaday 91 jilayaasha la ciyaari karo, sida Iron Man, Caaro-Man, Captain America, Wolverine, iyo wax badan ayaa la furi karaa markaad ciyaarta ku sii socoto. Xulashada qoyska waxaa laga heli karaa wakhti kasta iyada oo la iibsanayo dukaanka ciyaarta dhexdeeda.
• Dhammaystiran 45 hawlgallada waxqabadka leh marka aad hoos u eryanayso bulukeetiyada Cosmic ee guud ahaan goobaha muhiimka ah ee Caalamka Marvel
La dagaallama cadawga adoo isticmaalaya awoodaha awooda sare sida duulimaadka, xoog sare iyo muuqaal la'aan.
• Adeegso dhaq-dhaqaaqyada dagaalka degdega ah oo dhaqaaji Super Moves sida Hulk's Thunder Clap iyo Reactor Man's Arc.
• Buuxi caqabadaha oo hel abaalmarinno.
U beddelo inta u dhaxaysa kontaroolada "Console" iyo "Touch Screen" si aad u hesho qaabka ciyaarta ee adiga kugu habboon.
Ciyaartan waxaa ka buuxa saacado badan oo nuxur ah iyo shaleemo kuwaas oo qaada meelo badan! Waxaad u baahan doontaa 2.2gb oo bannaan oo bannaan qalabkaaga haddii aad ku rakibto wifi, laakiin kaliya 1.1gb oo boos ah haddii aad ku soo dejiso kumbuyuutarkaaga oo aad isku dhejiso.
Sida la rakibo app badan oo waaweyn, Waxaan kugula talineynaa inaad dib u bilowdo qalabkaaga ka dib marka aad rakibto sababtoo ah tani waxay xallin doontaa arrimaha xasilloonida qaarkood. Sidoo kale hubi inaad ku rakibtay firmware-kii ugu dambeeyay.
Looma baahna xiriir internet si ciyaartan loo ciyaaro.
Haddii aad la kulanto dhibaatooyin, fadlan nagala soo xidhiidh support.wbgames.com.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Geesiyaal, LEGO, Marvel, Super
← Simulator-ka Dhismaha 3 – Khiyaamo&Hack DQ Dai: Khiyaamada Dammaanadda Geesiga&Hack →